UNICEF: Carruurta dunida oo ay soo gaartay dhibaatada ugu darneed sanadkan 2017. | Maalmahanews
UNICEF: Carruurta dunida oo ay soo gaartay dhibaatada ugu darneed sanadkan 2017.
Hay’ada qaramada midoobay u qaabilsan caruurta ee UNICEF ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in carruurta ku nool wadamada ay ka jiraan rabshadaha iyo colaadaha ay soo gaartay dhibaataada ugu weyneed sanadaan 2017 markii ay noqdeen bartilmaameed iyaga oo loo isticmaalo gabbaad loona gaysto dil iyo dhaawac, iyo sidoo kale in loo askareeyo si ay u dagaallamaan.
UNICEF ayaa sheegtay in kufsiga, guurka khasabka ah, afduubka iyo adoonsiga caruurta ay noqotay wax iska caadi ah ee goobaha colaadaha ka jiraan sida wadamada Ciraaq, Suuriya, Yeman, Nigeria, Koonfurta Suudaan iyo Myanmar.
Hay’addu waxay ku eedeysay dhinacyada ku dagaalamaya degaannada ay colaadduhu ka jiraan”in ay iska indhotireen oo ay ka dhaga adeegayaan sharciyada caalamiga ah ee loogu talagalay in lagu ilaaliyo kuwa ugu nugul.
Xaaladaha qaarkood, carruurta ay afduubtaan kooxaha hubaysan ayaa inta badan markii ay soo daayaan kooxahaasi ama laga soo badbaadiyo waxa ay dhibaato la mid ah kala kulmaan ciidamada ammaanka, ayay UNICEF ku sheegtay hadal qoraal ah Khamiistii.
Hay’adda ayaa ka digtay in malaayiin caruur ah oo dheeraad ah ay halis ugu jiraan rabshadaha iyo khilaafaadka, oo ay ka mid tahay nafaqo-xumo, cudurro iyo dhaawacyada asaasiga ah, ayna ku adagtahay helitaanka cuntada, biyaha, fayadhowrka iyo caafimaadka